ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းအလေးချိန် & ဖြည့်
ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းဖြည့် automatic Pickled ပုလင်း
အလိုအလျောက် Package ကိုကုန်ပစ္စည်းလိုင်း
ဖြစ်ရပ်မှန် Packer စနစ်
round Bottle သတံဆိပ်ကပ်ခြင်းစက်
post အချိန်: 06-01-2020
Leadworld သည်တစ်ကမ္ဘာလုံးအတိုင်းအတာဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကုန်ပစ္စည်းလိုင်းဒီဇိုင်း - စည်သွတ်တူနာထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ စည်သွတ်ဆံပင်အလှကုန်ပစ္စည်း၊ စည်သွပ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းလိုင်းနှင့်စသည်တို့ကိုပြုလုပ်သည်။ ပစ္စည်းနှင့်ဆက်ဆံခြင်းမှထုတ်လုပ်သည့်လုပ်ငန်း၊ ဆေးကြောခြင်း၊ သေတ္တာတင်ခြင်း၊ , ထို Sanme အချိန်တွင်ငါတို့ကုမ္ပဏီဝီ ...ဆက်ဖတ်ရန် »
အချိန် post: 08-07-2018
In recent years, science and technology have developed rapidly, and automation has replaced labor, solving ...ဆက်ဖတ်ရန် »
ဒီက high-တန်ဖိုးကိုလေဟာနယ်ထုပ်ပိုးစက်များ၏အရည်အသွေးမကောင်းမသင့်ဖြစ်၏, သင်နောက်ဆုံးပြောများ
အချိန်ကာလမဖွံ့ဖြိုးသည့်အတိုင်းလူရဲ့အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီဘဝအသက်တာနှင့်အဆင်ပြေ၏အရည်အသွေးမြင့်မားလိုက်စားရှိပါတယ်။ မည်သူမျှအစားအစာငြင်းဆန်ပေမယ့်ဘယ်လိုအဆင်ပြေအစားအသောက်သိုလှောင်ခြင်းနှင့်ထုတ်ကုန်များ၏သက်တမ်းတိုးချဲ့ဖို့အစားအစာလေဟာနယ်ထုပ်ပိုးစက်၏အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်ပါသေးငယ်တဲ့စီးရီး ... ပေးရ ဆက်ဖတ်ရန် »
automated ထုတ်လုပ်မှု, ဖြည့်, ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးများအတွက်အကောင်းဆုံးစနစ်ကဖြေရှင်းချက်
တရုတ်နိုင်ငံအဆာစက်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုလမ်းကြောင်းသစ်နှင့်ခန့်မှန်းချက်ယနေ့ရဲ့အဆာစက်ပစ္စည်း, အထူးသဖြင့်အဖျော်ယမကာ, ဘီယာအဆာစက်ယန္တရားနှင့်မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းနှင့်အတူစားနပ်ရိက္ခာထုပ်ပိုးစက်ယန္တရား, ပြည့်စုံအစုံ, အလိုအလျောက်နှင့်ကောင်းမွန်သောယုံကြည်စိတ်ချရမြင့်မားဒီဂရီလည်းလက်ရှိအဆာစက်ပစ္စည်းများမှာ ... ဆက်ဖတ်ရန် »
ရှန်ဟိုင်း Leadworld စက်အလိုအလျောက်ကိရိယာများအဘို့အစည်သွတ်လုပ်ငန်းများအတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ကူညီ
အချိန် post: 07-31-2018
ရှန်ဟိုင်း Leadworld Machinery, Ltd. အလိုအလျောက်ကိရိယာများရှန်ဟိုင်း Leadworld Machinery နည်းပညာကုမ္ပဏီအဘို့အစည်သွတ်လုပ်ငန်းများအတွက်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုကူညီမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်စည်သွပ်ဗူးလိုင်းထုတ်လုပ်သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာတပြင်လုံးကိုစက်ရုံအတွက်နောက်ဆုံးပေါ်နှင့်ပိုပြီးကျိုးကြောင်းဆီလျော်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းပေးပါသည် ... ဆက်ဖတ်ရန် »
နေရပ်လိပ်စာ: NO.5599 Shenzhuan လမ်းမကြီး Songjiang ခရိုင်, ရှန်ဟိုင်း
ဖုန်းနံပါတ်: 86 021- 37693309
E-mail ကို: lora@leadworld.net
In 2021, are you still talking ...
Yellow peach is named yellow peach because of its bright yellow flesh. Peach meat is fragrant and sweet, and it is al...
What’s the matter that th...
One of the packing characteristics of the auto thermoforming vacuum packing machine is vacuuming. By extracting the a...
© Copyright - 2010-2018: အားလုံးအခွင့်အရေး။ - နေဖြင့်ပါဝါ Globalso.com